Degmooyinka Qaar oo diida gudniinka wiilasha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka Qaar oo diida gudniinka wiilasha
La daabacay fredag 20 juli 2012 kl 11.22
Shan kamid ah landsting-yada dalkaan ayaa diida gudniinka raga ee aan arin caafimaad darteed loo samaynin. Inkastoo ay sadex sanno ka hor ku taliyey ururka Sveriges kommuner och landsting, SKL, in dhamaan degmooyinka iyo gobaldo ay u ogalaadaan dadka raba in ay wiilashooda gutaan.
Talada SKL ayaa salka ku haysay in hadii loo diido dadka raba in ay wiilashooda gutaan ay taa kamicno noqon karto ku xadgudub xoriyada diiinta. Talada ayaa ay SKL uga gol-lahayd si loo dhowro wanaaga caruurta oo aysan u dhicin in daadka ay weelashooda ku gutaan guriyahooda.
Karin Lundström oo ah gudoomiya caafimaadka iyo daryeelka ee gobalka Västerbotten ayaa wargeyska DN u sheegtay in gudniinka weelasha ahayn wax shaqo ku leh daryeel caafimaad, landstingoodana ay haysto dhaqaalo xumo, saas darteedna ay tahay in ay mudnaanta siiyaan dadka jiran.